Hiriirri Mormii Oromiyaa Itti fufee jira Lubbuun Namaas darbe jedhu Jiraattonni
Amajjii 19, 2016
Harargee lixaa aanaa Meessoo magaalaa Meessoo araddaa Saa’oo bakka Kaarraa jedhamutti “Liyyuu Poolis” jedhamu har’a ganama lubbuu namaa galaafachuu jiraattonni naannoo nuuf ibsanii jiran. Mucaan har’a du’e kan dheengadda Humuma Liyyuu poolis Kanaan ajjeefame abbeeraa Abdallaa Alii jedhamuu ta’uu kan nuuf himan jiraataan magaalaa Meessoo tokko haala magaalattii keessaa kan guyyaa har’aa akkasu jechuun ibsan.
Haaluma kana angawoota mootummaa biraa adda baafachuuf gara itti aanaa bulchaa aanaa Meessoo obbo Mohamed Jamalitti bilbillee ajjeechaa namaaf humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatan jedhame ni haalan.
Gama biraatiin immoo Achuma aanaa Meessoo magaalaa Asabot keessatti hiriirri dheengagdda halkan fi kaleessa halkan hirirri geggeeffamuu isaa dubbatu jiraattonni. Asaboot waa’ee halkan dabree dubbatuun jalqabna.
Godina Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keesssa kan jiru barattoonni mana barnootaa qoophaa’inaa Naaqamtee har’a hiriira ba’anii jiran. Kaayyoon hiriira isaaniis Maastar plaaniin dhaabate jedhanii nu hin gowwoomsan nuti hin fudhannu, kanneen hidhamanii jiranis nuuf haa hiikaman jechuun mormii dhageesisuu isaanii barattoonni nuuf ibsaniiru
Yaadawwan Ilaali (63)
Naannoo Yunivarsitii Haramaayaatti, Humnoonni Mootummaa Qonnaan-bultootatti Dhukaasan, Jedhu Barattoonni
Magaala Amboo,Yuniverstii Dirree Dhawaa fi Manii Barumsa Qophahina Shaashamannee Maal keessa Oolan?
Dhaabonni Mirgaa Siivilii Sadii Akka Hawaasni Addunyaa Waa’ee Ajjeefamuu Hiriirtota Oromoo Dubbatu Gaafatan
Hiriira Mormii Oromoonni Yunaayitid Isteets Keessaa Waajira Tokkummaa Mootummootaa Ka Niwu Yoork Jiru Fuul-duratti Geggeessan
Mormiin Harargee Lixaa aanaa Meessoo Keessaa Guyyootaaf Itti fufee Jira. Man-barnootaa Shawaa Lixaa Tokko Keessas Mormii Dhageessisan